Ezweni lethu, kube nephutha uhlelo intela kahle ngokomthetho. Ngaphezu kwalokho, eziqoqwayo kukhona Umthombo oyinhloko wemali kwesabelomali isimo emazingeni onke. Ngakho, ukuhlola ngobuqotho ukuqapha nesikhathi nokukhokhwa izinkokhelo oyisibopho futhi, esimweni izikweletu imfundo, qala inqubo nokuqiniseka. Yingakho kubalulekile ukuze ukugcina umkhondo imfundo yabo siqu izikweletu zalo intela ngendlela esifike ngesikhathi futhi wokukucima kubo.
Okwamanje, i-Federal Tax Service njalo isakhiwa zonke izinhlobo ezintsha ezenza kalula futhi wenze ukhululekile kakhulu nezinqubo nokuxhumana yabakhokhintela sika neziphathimandla yentela. Izimpendulo zemibuzo kakhulu, izithakazelo izakhamuzi ezivamile, manje ngokushesha ezitholakele ku-website esemthethweni isevisi, ngaphandle zokuchitha isikhathi kolayini eside e amayunithi indawo. Ngokwesibonelo, ngosizo umthombo Inthanethi isevisi intela esifundeni yabo kungaba ukufunda izikweletu zentela i-VAT.
Ukuqala ukuchaza, uyini-INN nalapho kungathatha. INN isifinyezo is ziqala kanje - inombolo abakhokhi bentela ukuhlonza ngabanye. Ezweni lethu, wabelwe wentela ngamunye liyadingeka amukelwe. Ukuze abe TIN, kumele ufake isicelo ukuhlolwa endaweni sokubhalisa futhi ugcwalise ifomu edingekayo. VAT okuzokhishwa ngesimo isitifiketi ngomhlangano wanyathela futhi wasayinwa ikhanda sokuhlolwa. Ngokokuqala ngqá e-ukuphila isitifiketi TIN abantu baqiniseka mahhala. Endabeni ka ukulahlekelwa idokhumenti, ifake isandla ekubuyiselweni kwalo kuyodingeka ukuba akhokhe ethile emsebenzini wombuso.
Ngakho emuva umbuzo indlela ukunquma izikweletu sakho sentela i-VAT. Indlela elula - ukuze ujike ulwazi ku-inthanethi - imithombo isevisi intela endaweni yangakini. On ke sithola ithebhu "Abantu". Chofoza kuso bese ubheka isixhumanisi esikuvumela obaziyo izikweletu sakho sentela i-VAT. Ukuphathwa amayunithi ezahlukene indawo bahlelekela kwamanye amasayithi ehlukile. Ngokwesibonelo, e-Perm esifundeni ohlangothini esinxeleni sewindi kunokuhlobana "akhawunti Siqu abakhokhi bentela", futhi Rostov esifundeni, ngakwesokudla - ". Funda mayelana wokukweleta yakho" Okwakushiwo umsebenzi lezi izinkomba kuyafana. Ku-window ebukeka sengathi okwanele ukuze ubonise inombolo yabo VAT ulwazi lomuntu siqu - igama, igama lokuqala patronymic. Kwabe sekuthi ngo-window pop-up kuzothinta inani izikweletu zentela, uma ikhona. Lapha ungakwazi futhi bajwayelane oxhumana sokuhlolwa intela, kuhlanganise lapho ubhaliselwe wentela.
Ngakho, uma ungavumelani isikweletu ku ukukhokha intela, uzokwazi ukusebenzisa ukuba luhlolwe zabo noma nge e-mail noma ngocingo, noma ngokuya khona mathupha. Kunoma ikuphi, umhloli intela esizolungisa impendulo ewujuqu yonke imibuzo bese unikeza irisidi sokukhokhwa kwesikweletu ekhona.
Uma ungenayo i-Internet, noma kukhona isifiso on the spot ukuxazulula zonke izinkinga, ungaphinda ngokushesha zisebenza wokuhlola mathupha noma ngocingo. Tax abahloli bafeze imisebenzi yabo ngendlela efanayo. Into kuphela okudingeka sikukhumbule ukuthi ochwepheshe ngokushesha wabutha wonke ulwazi olufanele mayelana wentela, uma nje kwasekuqaleni bayoba ukwaziwa TIN yayo. Ngakho-ke, inhlanganisela yezinombolo namanje kuwufanele azi uma uxhumane ehhovisi lentela.
Ngakho manje wena ukwazi ukuthi ukuthola esikweletini ku-VAT. Le nqubo kuba isikhathi eside futhi isikhathi esiningi. Ngakho-ke, iningi mhlawumbe namanje kuthathe amaminithi ambalwa ukuze uthole izikweletu zakho intela i-VAT kuka ukwazi khona ngemva kwesikhathi eside kakhulu, ngokuthola umyalezo ngalo bailiffs nezimantshi.
Iziphathimandla intela - Iyini? Imisebenzi, imisebenzi
Ingabe akhokhe ezokuthutha intela abanokukhubazeka amaqembu 2 ku Russian Federation?
Abathandwayo master class Wabasaqalayo abantu Ukugunda. izimbali Ngokucophelela - nezikhencezo ubuhlalu
Natalia Gundareva: Filmography aktorisy enkulu
Dmitry Skvortsov - intatheli Ukrainian: Biography, izincwadi
The Smurfs Amathoyizi: Blue gnomes ezihlekisayo